စားပြီးအိပ်လေ ဤလူ့ပြည် Eat/Sleep | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » စားပြီးအိပ်လေ ဤလူ့ပြည် Eat/Sleep
စားပြီးအိပ်လေ ဤလူ့ပြည် Eat/Sleep
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 22, 2011 in Community & Society, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, News |5comments
ညဖက်ဆာတတ်လို့ အိပ်မပျော်တာဆိုပြီး ညသန်းကောင် သွားရည်စာ စားနေရသူများအတွက် သဘာဝအလျောက် အိပ်မောကျစေရန် အထောက်အကူပြုမည့် အစားအစာငါးမျိုးကတော့….
၁. ချယ်ရီသီးမှာ အိပ်ပျော်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းစနစ်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ melatonin ဓာတ်ပါရှိသည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ခရီးစဉ် မစတင်မှီ တနာရီအလိုမှာ ချယ်ရီသီး သို့ ချယ်ရီသီးပါတဲ့မုန့်များကို စားခြင်းဖြင့် အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် melatonin ဓာတ်ကိုရရှိသည်။
၂. ငှက်ပြောသီးတွင် သဘာဝအလျောက် ကြွက်သားကိုပြေလျော့စေသော natural muscle relaxants ပိုတက်စီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်များ အလုံအလောက် ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ဦးနှောက်အတွင်း 5-HTP အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် L-tryptophan လည်းပါရှိသည်။ 5-HTP သည် serotonin (a relaxing neurotransmitter) and melatonin သို့ ထပ်မံပြောင်းလဲသွားသည်။
၃. ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများသည် အပန်းပြေ အိပ်ပျော်စေသော tryptophan and serotonin ဓာတ်များထုတ်လွှတ်မှုကို အင်ဆူလင်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း လျှင်မြန်စေရန် တွန်းအားပေးသည်။
၄. Oatmeal (ကွေကာအုတ်) သည် သွေးအတွင်း သကြားဓာတ်မြင့်တက်မှုကို တွန်းအားပေးပြီး ယင်းမှတဆင့် အင်ဆူလင်ဓာတ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အိပ်ခြင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသော ဦးနှောက်ဒြပ်ပေါင်းများ ထုတ်လွှင့်မှုကို တွန်းအားပေးသည်။
၅. မပူ့တပူ နွေးနေသောနို့တွင် ငှက်ပြောသီးကဲ့သို့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် L-tryptophan ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် အိပ်ပျော်ခြင်းကို အားပေးသည့် မြင့်မားသော ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်လည်း ပါရှိသည်။
ငှက်ပျောသီးခမြာလည်း လူပြောသူပြော အတော်ခံရတာပဲ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ကြွက်သားတွေပြေလျှော့စေတယ်ပြောတဲ့ … အချက်အလက်တိတိကျကျပြထားတဲ့.. ကိုရင်ကြောင်ကြီး ဘာသာပြန်ကို ပိုယုံပါတယ်..။
ငှက်ပျောသီးကို မပူ့တပူနို့နဲ့ မျောချပြီး အိပ်တော့မယ်..။
မနောက်ပါနဲ့ဦးရယ်။ မူရင်းစာထဲပါတဲ့ ဆေးစကားလုံးတွေကို Word ထဲမှာ အနက်အဓိပ္ပါယ်တူစာလုံး ရှာကြည့်တာမတွေ့လို့၊ အွန်လိုင်းတက်ရှာဖို့တော့လည်းပျင်းလို့ တိုက်ရိုက်ညဏ်မှီသလောက် ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး။
ကယ်ကြပါအုံးဗျို့… သဂျီးရယ် အာဏာအလွဲသုံးပြီး ကျနော့်ကို နှိပ်ကွပ်နေပါတယ်။
( ရခိုင်ငှက်ပျောပင်ပေါ်မှာ မွေပွေးရှိနေလျှင် ရခိုင်ငှက်ပျောပင်ကို အလျှင်ခုတ်လှဲပြီး မွေပွေးကိုနောက်ခုတ် )
စတော်ဘယ်ရီနဲ့ နို့နဲ့ ဖျော်ထားတာ မနက် အလုပ်မသွားခင် သောက် အလုပ်ရောက်တော့ မျက်လုံး မဖွင့်နိုင်အောင် ငိုက်…
နို့ တခွက် သောက် အလုပ်သွား အလုပ်မှာ မျက်စိမဖွင့်နိုင်အောင် ငိုက်…
ကော်ဖီသောက်မှ မနက် အလုပ်မှာ အဆင်ပြေတယ်။